Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » 2021 Best US Dog Park Obodo
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ị gaghị ahụ oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ enyi na enyi n'ebe niile na America, ma ọ bụrụ na ịchọta, ha niile agaghị adịcha anwụrụ.
San Francisco na-achị ebe ndị ọzọ na-elekọta ogige nkịta America dị ka Nr. 1 Dog Park City kacha mma.
Boise, Portland, na Henderson na -anya isi ọnụọgụ atọ nke ogige nkịta na US mgbe edoziri maka nha ndị mmadụ.
Obodo kachasị ukwuu nke Lone Star State na -ejedebe ọdụ na ụkwụ ha n'etiti ọkwa.
Ogige nkịta bụ ebe dị mma maka pups - na ndị nwe ha - izute. Ọ bụ ezie na nwa ajị anụ ha na -awagharị n'efu ma na -eme enyi, nne na nna nwere ike iso ndị hụrụ nkịta ibe ha na -akpakọrịta.
Mana ị gaghị ahụ oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ enyi na enyi n'ebe niile America, ma ọ bụrụ na ị mee ya, ha niile agaghị adịcha anwụrụ. Yabụ kedu obodo kacha mma Dog Park nke 2021?
Ndị ọkachamara họọrọ 97 US obodo dabere na nnweta, ịdị mma, na ọnọdụ ihu igwe iji chọpụta.
Hụ obodo iri na -eduga (yana iri nke na -ada n'azụ) ngwugwu dị n'okpuru, ụfọdụ isi na obere nkọwa sitere na akụkọ ahụ sochiri.
Obodo kacha mma Dog Park nke 2021
4 Boise, NJ
10 Tampa, F
Obodo Park Dog Park kacha njọ nke 2021
91 Cincinnati, Oz
93 Onwuchekwa NJ
95 Ochie, TX
San Francisco: Onye ndu nke ngwugwu: Obodo Golden ahụ na-achịkwa ebe nchekwa ogige nkịta ndị ọzọ nke America dị ka Nr. 1 Dog Park City kacha mma.
Nkịta bụ ezigbo enyi nwoke/nwanyị ebe a: Pups (nke a na -asị na ọ bụ) karịrị ụmụaka - ụmụaka mmadụ, ya bụ - na San Francisco. Yabụ na ọ bụ ihe dị n'okike na obodo ahụ ga -ewepụta nnukwu oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nye otu n'ime ndị bi na ya. N'ezie, Golden City karịrị obodo iri itoolu na abụọ nke ọnụ ọgụgụ ogige ntụrụndụ n'ime 92 (ndị nwere ụkwụ abụọ).
Di na nwunye ahụ na-eme ọmarịcha arụmọrụ na Access (Nke 5) ya na ihu igwe na-eme mkpọtụ (Nke 8), na San Francisco na-enweta ọkara ọkara ya karịa Oakland ka ọ nweta ebe mbụ n'ozuzu ya. Obodo a na -ewere ịhụnanya nwa nkịta na ọkwa ọhụrụ.
N'ebe ọdịda anyanwụ na ngosi: San Francisco abụghị naanị obodo ọdịda anyanwụ na -ezuru ntụpọ na ọkwa anyị. Obodo California anọ ọzọ, yana Portland, Oregon, na Nọmba 3, Boise, Idaho, na Nọmba 4, na Henderson, Nevada, na Nọmba 6 na -ekwu ebe ndị ọzọ dị na 10 kacha elu.
Kedụ ka ndị ọdịda anyanwụ si merie n'ọsọ a? Obodo ndị buru ibu na California na-agbago elu na ihu igwe ụdị Mediterranean ha-dị mma maka ọmarịcha nlegharị anya kwa afọ na ogige nkịta. Boise, Portland, na Henderson, n'aka nke ọzọ, na -anya isi ọnụọgụ atọ nke ogige nkịta na mba ahụ mgbe edoziri maka nha ndị mmadụ. Soro onye enyi nkịta gị biri n'otu n'ime obodo ndị a, ị ga -azụlite otu nwa akwụkwọ mebiri emebi.
Obodo Texas dị na nkịta: Obodo kachasị ukwuu nke Lone Star State na -ejedebe ọdụ na ụkwụ ha n'etiti ọkwa. Na Mba 41, El Paso nọ n'etiti obodo Texas.
Ọ bụ ihe nwute, obodo Texas ise gbadara na ala 10, gụnyere Fort Worth, Arlington, na Plano na ebe 88 ruo 90, n'otu n'otu, na Garland na 95th. Laredo batara n'ikpeazụ.
Kedu ihe kpatara ngosipụta adịghị mma ha? Enweghi ike ịnweta ogige nkịta bụ ihe kpatara ya. Maka Laredo, ọ dịkwa mma ogo ogo ogige - ndị kacha daa ogbenye, n'eziokwu, n'etiti obodo anyị tụrụ. Bad, Texas!